स्यानिटाइजरले हात धुदाँ मर्छन् त कोरोनाका किटाणु ? - Civil Khabar
स्यानिटाइजरले हात धुदाँ मर्छन् त कोरोनाका किटाणु ?
by civilkhabar २०७६ चैत्र १७, सोमबार २२:३५ 0
कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न अधिकाशं मानिले मास्क र ह्याण्ड स्यानिटाइजरको प्रयोगमा जोड दिएका छन् ।
तर अहिले बजारमा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको कालोबजारी शुरु भएको छ । बजार मुल्य भन्दा दोब्बर तेब्बर मुल्यसम्म लिन थालिएको स्यानिटाइजरको मुल्य बारे सरकारले नियमन भने गर्न सकेको छैन ।
अधिकाशं औषधी पसलमा अभाव भएको स्यानिटाइजर पाइएको स्थानमा भने महंगो मुल्यमा बिक्रि हुदै आएको छ । तर स्यानिटाइजरको प्रयोगले कोरोनाको किटाणु मार्छ त ?
कुनैपनि रोगको सम्भावित किटाणुहरुलाई मार्नका लागि स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिन्छ । तर कोरोनाको किटाणु मार्न स्यानिटाइजर भरपर्दो विकल्प भने होइन ।
चिकित्सकहरुका अनुसार स्यानिटाइजरको एक थोपाले हत्केलाका सबै किटाणुलाई मार्छ भन्ने सोच गलत हो । धेरैजसो स्यानिटाइजर ६० प्रतिशत अल्कोहलका साथ आउँछन् र कीटाणु पूरै मार्न यो पर्याप्त हुँदैन । साबुनले हात धुनु बढी राम्रो हो ।
स्यानिटाइजरमा अल्कोहलको मात्रा कम र ट्राइक्लोस्यानको मात्रा धेरै हुन्छ । ट्राइक्लोस्यान शक्तिशाली एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्ट हो ।
तर ट्राइक्लोस्यानले रुघाखोकीमा एन्टीबायोटिकले काम गर्न सक्दैन । अल्कोहल भएका स्यानिटाइजरले सामान्य ब्याक्टेरियालाई सुपरबग बनाइदिन्छ । साथै स्यानिटाइजरले प्रयोगले खराब ब्याक्टेरियाका साथै राम्रो ब्याक्टेरियालाई पनि मारिदिन्छ ।
यो तपाईंको रोगप्रतिरोधक क्षमताका लागि पटक्कै राम्रो होइन । त्यसैले सम्भव भएसम्म समय समयमा हात धुनु नै प्रभावकारी विकल्प हो । यदि कारणवशं पटक पटक हात धुन सम्भव नभए मात्र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने विकल्पको रुपमा राख्नुपर्दछ ।
विशेषतः कसैसँग भेटेपछि वा खाना खानुअघि अनिवार्य हात धुनुपर्छ । कोरोनाको संक्रमण हात मिलाउँदा सर्ने भएकोले हात मिलाउन बन्द गर्नुपर्दछ ।
सिरानीमा मोबाइल राखेर सुत्दा के हुन्छ हानी ? थाहा पाउनुस्
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ३७ हजार नाघ्याे, संक्रमितको संख्या सात लाख ८४ हजार
कहिले आउँछ नेपालमा काेराेना भाइरसकाे खोप ?
civilkhabar २०७७ मंसिर २०, शनिबार ०९:१२
उपत्यकामा थपिए ६ सय ७४ संक्रमित
civilkhabar २०७७ आश्विन ५, सोमबार १७:००
गण्डकी प्रदेशका ३ सांसदलाई कोरोना पुष्टि
civilkhabar २०७८ बैशाख १५, बुधबार १०:३१ २०७८ बैशाख १५, बुधबार १०:३९